Israel weputara onodu ohuru nke na emechi njem ndi njem ogwu
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ njem Israel » Israel weputara onodu ohuru nke na emechi njem ndi njem
Israel weputara onodu ohuru nke na emechi njem ndi njem
Ọ fọrọ nke nta ka Israel gbaa ọgwụ mgbochi. International Tourism na-achọ ịmalite na July 1. Nchọpụta ọhụụ metụtara Delta dị iche iche dị egwu nke nje COVID na-eme ka obodo ndị Juu kagbuo ụbọchị mmeghe a na-eme nke ọma maka ndị njem mba ọzọ ịga leta Israel.
A ga-agba akwụkwọ ụgbọ elu si US gaa Israel na July. Hotels na Tel Aviv na Jerusalem nke mbụ nwere ọnụego ịgba akwụkwọ dị elu na ndị njem nleta na-atụ anya ị ga-esi United States.
Israel mere nnukwu ọkwa na-eme mmemme mmeghe nke obodo ndị Juu maka njem nleta maka ndị ọbịa gbara ọgwụ mgbochi. Nke a kpaliri ọkwa yiri nke mba ndị ọzọ.
Taa, Israel Media na-akọ na agaghị ekwe ka ndị njem si mba ọzọ gbaa ọgwụ banye Israel tupu Ọgọstụ 1. Nchọpụta ọhụụ banyere ọdịiche Delta dị egwu na-egbu oge ịmaliteghachi mba ahụ. Nke a nwekwara ike ịkpalite ihe ọzọ na-eme n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa.
Israel Prime Minista Naftali Bennett gọọmentị kpebiri taa, Wenesde, ka Israel na-eche ihu na mmụba nke ikpe coronavirus iji gbanwee usoro ịmegharị ụzọ maka mba ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, a ga-eweghachite ọrụ nke itinye ihe nkpuchi n'ime ụlọ ma ọ bụrụ na okwu ikpe kwa ụbọchị gafere 100 maka otu izu.
"Ihe mgbaru ọsọ anyị n'oge a, nke mbụ, bụ ichebe ụmụ amaala Israel site na Delta dị iche iche nke na-ada mba ụwa," Bennett gwara ndị mgbasa ozi mpaghara. “N'otu oge ahụ, anyị chọrọ iwepu oke mbibi na ndụ a na-adị kwa ụbọchị na mba ahụ. Ya mere, anyị kpebiri ime ihe ngwa ngwa dị ka o kwere mee - ugbu a - ka anyị wee ghara ịkwụ ụgwọ dị arọ karịa mgbe e mesịrị, site n'ime ihe dị mkpa na ngwa ngwa. Ọ dịịrị anyị. Ọ bụrụ na anyị na-erube isi n'iwu ma na-eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, anyị ga-agakọ nke ọma. ”
E kwesịrị ikwe ka ndị njem nlegharị anya banye n'ime obodo malite na July 1. Nke a mara ọkwa na a Atụmatụ iwughachi njem.
N’ụbọchị ndị a, Delta dị iche iche kụrụ mba ahụ, na-ebute mmụba nke ọrịa na obodo ndị dị ka Modi’in na Binyamina.
Mkpebi ndị isi obodo Israel maara nke ọma itinye nchekwa nke ụmụ amaala ya nwere ike ibute omume maka ebe ndị ọzọ na-eme njem nlegharị anya gburugburu ụwa. Ọ nwere ike ịbawanye mgbochi maka ndị njem na-abata, n'agbanyeghị echiche nke ịgba ọgwụ mgbochi bụ isi ọlaedo maka njem na njem njem.
E nwere ugbu a ụfọdụ 554 nọ n'ọrụ ikpe na mba. Onu ogugu a adighi ala na nso nso a na onu ogugu abuo 200. Na oge ogugu ya gara aga, onu ogugu a kariri 85,000.
N'isochi ntiwapụ nke ugbu a na nkwanye ọhụụ nke ndị ọchịchị nyere ka ha gbaa ụmụaka niile gbara afọ iri na abụọ ruo afọ iri na isii, ihe karịrị puku asaa gbara okpuru na Tusde, nke kachasị n’ime otu ọnwa. Ihe dị ka 12 n'ime ha bụ ọgwụ mbụ emere ụmụaka, ihe dị ka okpukpu abụọ nke ụbọchị ndị gara aga.
Iji dozie ntiwapụ ọhụrụ ahụ, gọọmentị kpebiri iguzobe kabinet ọhụrụ coronavirus gụnyere Bennett, Mịnịsta Ahụike Nitzan Horowitz, Mịnịsta Ofesi Yair Lapid, Mịnịsta na-ahụ maka nchekwa Benny Gantz, Mịnịsta na-ahụ maka ego Avigdor Liberman, Mịnịsta Ikpe Ikpe Gideon Sa'ar, na Minista ime obodo Ayelet Shaked , tinyekwara ndị ozi ndị ọzọ.
N’ụtụtụ ụbọchị ahụ, Mịnịstrị na-ahụ maka ahụike kwupụtara na n’ọnọdụ ụfọdụ, ndị na-agba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ndị gbakere nwere ike inye iwu ka ha banye kewapụ iche.
Dika iwu di ugbu a, ndi mmadu a na-ahuta ka ha zuru oke (otu izu mgbe agbaputara ha nke abuo ma obu mgbe ha gbakere site na oria a) enweghi ikepu ha ma oburu na ha na onye nje virus a mata.
Agbanyeghị, dị ka iwu ọhụrụ nke onye isi ọhaneze Chezy Levy bịanyere aka, onye isi izugbe, dibia mpaghara, ma ọ bụ onye isi nke Ọrụ Ahụike Ọha ga-enwe ike ịrịọ ka ndị a wezuga onwe ha ma ọ bụrụ na ha na onye na-ebute ọrịa ahụ nwere ụdị nje dị iche iche a na-ahụta dị ka ihe dị egwu ma ọ bụ na mmemme nwere oke nrịanrịa dị egwu. Ha nwekwara ike ịhapụ iche ma ọ bụrụ na ha na ndị bi na nnukwu nsogbu ma ọ bụ na enweghị ọgwụ mgbochi, ma ọ bụ na ha na-efe n'otu ụgbọelu na ụgbọelu coronavirus a chọpụtara. ọdụ ụgbọ elu na ụlọ ọrụ ahụike.
Onye ozi ahụ kwenyesiri ike na esemokwu logist na ọdụ nnwale nke Ben-Gurion - nke mere na Fraịde mere ụfọdụ ndị njem 2,800 na-abata n'ụlọ na-enweghị ule, dị ka achọrọ maka ndị niile bi na Israel - edozila, yana ndị mmanye ahụ nke ụkpụrụ njem na usoro a na-agbago.
Ndị Israel na-efega mba ndị dị n'okpuru mmachi njem - n'oge Argentina, Brazil, India, Russia, na South Africa - na-anataghị ikike site na kọmitii gọọmentị pụrụ iche ewepụtara maka ebumnuche a, ga-akwụ ụgwọ ugbu a.
Mmelite ndị ọzọ na https://israel.travel/